I-GoSquared: Real-Time Analytics kanye nedatha | Martech Zone
NgeSonto, Novemba 17, 2013 Douglas Karr
Uma ungazange uzwe ngakho I-GoSquared, isivele isebenza kumawebhusayithi angaphezu kuka-30,000! Izimakethe zeGoSquared uqobo njengezilula, ezilula ukuzisebenzisa analytics njalo. Abahlosile kuphela ukuthatha ukubona kwe- analytics idatha ezingeni elilandelayo, idatha uqobo lwayo ingeyakho nge-API yabo eqinile. I-GoSquared ihlose ukukunikeza konke okudingayo ku-interface enembile.
Izici ezibalulekile ze-GoSquared Analytics:
Manje Ideshibhodi - IGoSquared's analytics ipulatifomu iqinisekisa ukuthi ungabona ama-spikes omgwaqo futhi ukhiphe ngokushesha lapho zenzeka khona. IGoSquared ikukhombisa ukuthi kwenzekani kusayithi lakho ngesikhathi sangempela.
Amathrendi we- - IGoSquared ibeka amamethrikhi akho asemqoka kokuqukethwe. Izivakashi, isikhathi sokuzibandakanya ngenkuthalo kusayithi, isilinganiso sebhizinisi nokuningi.
Izivakashi Zokuhlaziya - I-GoSquared Visitor Analytics idlulela ngaphezu kwamagrafu namashadi ukukukhombisa abantu abasendaweni yakho, ufunda ibhulogi yakho futhi usebenzisa uhlelo lwakho lokusebenza.
Social - IGoSquared inokuhlanganiswa okuqinile namanethiwekhi aphezulu okuxhumana nomphakathi afana ne-Twitter, Facebook, Pinterest kanye ne-Dribbble yabaqambi.
Imibiko yansuku zonke - IGoSquared inikeza isifinyezo sokusebenza kwakho okulethwa kubhokisi lakho lokungenayo njalo ekuseni.
Amathimba - Ukwabelana kwethimba kwakhiwe ngaphakathi kusukela ngosuku lokuqala. Mema wonke umuntu oseqenjini lakho ukuthi asebenzise iGoSquared - i-CEO, abathuthukisi, abaklami kanye nokuthengisa, ngamunye angahlela ulwazi lwabo.
ukuzibophezela - Izinyathelo zeGoSquared zokuzibandakanya kwezivakashi ukuqonda isikhathi abantu abasichitha befunda, bepheqa, bathayipha, futhi bexhumana nesayithi lakho, ukuze ubone ukuthi yikuphi okuqukethwe okusebenzayo ngempela.
I-Developer API - Ukwakha ukubonwa kwedatha, ukuhlanganiswa kokushintsha okuqukethwe, kanye namadeshibhodi wesiko kungenzeka ngefayela le- I-GoSquared API.
I-GoSquared ifaka phakathi i- i-plugin ye-WordPress ekhiqizwayo ukulanda.